Gen:- Odawaa oo sheegay in ay gacanta ku dhigeen qar ka mid ah Argagaxisada soo weerartay Awdheegle - JNN24
Gen:- Odawaa oo sheegay in ay gacanta ku dhigeen qar ka mid ah Argagaxisada soo weerartay Awdheegle
Maleeshiyaadka Al Shabaab ayaa maanta barqadii isku dayey inay weerar ku qaadaan Saldhigga Ciidanka Xoogga dalka ee degmada Awdheegle gobolka Shabeellaha Hoose balse Ciidanka oo ka warqabay dhagarta Argagaxisada ayaa weerarkaas ka hortagay.
Ciidanka ayaa wadda howlgal ay kagaga sifaynayaan inta hartay haradiga Al Shabaab ee weerarka ku soo qaaday Awdheegle si ay u qalqal gilyaan shacabka ku soo noqonyay goobah ay ciidamadu kala wareegen,Taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka ayaa sheegay in ay si socon doonnaan howlgaladda lagu xorreynayo deegaanada yar ee ku harsan gacanta arxan lawayaasha Al-Shabaab.
Taliyaha Ciidanka Luqta General Yuusuf Raage Odawaa oo lahadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in degmada Owdheegle yaaliin hadda meydadka raggii weerarka soo qaaday kuwaas oo aan ilaa yaa hada laga qadiin goobtay ay ku jabeen .
Dhanka kale Taliyaha ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigay qar ka mid ah maleeshiyaadkii soo qaaday weerarka maantay barqonimadii.
← Horjooge Cali Dheere oo dhaawac culus ka soo gaaray howlgal ka dhacay Shabeellaha hoose
Somalia: Finance Assistant GS4 (TA), Mogadishu, CO, Post#111089(Somali Nationals only) →